"(Hoy ilay tompon’ny tanimboaloboka:) Fa ilay farany dia tiako homena toraka ny anao koa. Tsy mahazo manao izay tiako amin’ny ahy va aho? Ratsy va ny masonao, satria tsara aho?"" Matio 20:14,15
Fanoharana vitsivitsy; Matio 20:1-16
Famintinana: Nitady olona hiasa ao amin’ny tanimboalobony ity lehilahy iray. Vao maraina izy dia nampiditra maromaro, ary nifanaraka tamin’izy ireo momba ny karamany: “denaria” iray ho an’ny tontolo andro. Adiny telo taorianan’izany, sy adiny telo avy teo koa, dia mbola nampiditra mpiasa hafa indray izy, ary nampanantena fa hanome azy ireo araka izay heveriny fa rariny. Ary farany, adiny iray talohan’ny hiravana, dia mbola nahita mpiasa hafa ihany izy, ka nampiditra azy ireo sy nanao fampanantenana toy ny teo aloha. Rehefa hariva ny andro dia nahazo karama mitovy ny mpiasa rehetra, dia denaria iray! Nimonomonona iretsy nampidirina voalohany, saingy namaly kosa ilay tompon’ny tanimboaloboka hoe nandoa ny karama nifanarahana izy, ary te hanao soa tamin’ny hafa.
Heviny: Ny tompon’ny tanimboaloboka dia ny Tompo. Ny mpiasa dia ny mpino mba afaka manompo Azy. Misy efa nahafantatra sy nanompo Azy hatramin’ny fahakeliny, ny hafa kosa efa antitra vao nifanena taminy. Ny sasany nanao fanompoana ampahibemaso, ny hafa kosa toa tsy dia nahavita firy ho Azy…
Fampiharana: Angamba isika hiandany amin’iretsy mpiasa nimonomonona? Nefa izy ireo dia efa “nifanaiky” tamin’ny tompon’ny tanimboaloboka fa ho denaria iray no ho karamany, ary nandray izany. Iretsy mpiasa hafa kosa dia natoky ilay tompo, ka afaka nankasitraka ny hatsaram-panahiny.”
Ny mpiasa tsirairay dia mifampiraharaha amin’ny Tompo. Ny ankasitrahin’ny Tompo alohan’ny zavatra rehetra, dia ny matoky tsotra fotsiny ny fahamarinany sy ny fitiavany. Amin’ny finoana no anompoantsika Azy hatrany, tsy mihevitra izay valisoa na mampitaha ny tena amin’ny hafa. Ny fahasoavan’ny Tompo dia finaritra mamaly soa ireo izay tsy mba miady varotra. Io fahasoavana mahagaga io no namonjy ahy!